Akaakuu Taattoo Sarara
Taattoon sarara gatiiwwan akka tuqaaleetti siiqqee y irratti agarsiisa.Siiqqee x kutaalee agarsiisa. Gatiiwwan deetaa walfaannee tokkoon tokko isaanii sararan walindhamu.
Tuqaalee qofa - kutaan citaa kun tuqaalee qofa pilootessa.
Tuqaalee fi sararoota - kun tuqaalee pilootessuu fi tuqaalee deetaa walfaannee walfakkaata sararan walindha.
Sararoota qofa - citni akaakuu kun sararoota qofa pilootesa.
Sararoota 3D - citni akaakuu kun tuqaalee deetaa walfaannee walfakkaataa sarara 3Dn walindha.
Gatiiwwan tuqaalee y tokko tokkoo kuusama isaanii gubbaa irratti qindeessuuf Tartiiba walfaannee mallateessi.Tarjaa duraa tuqaalee tartiiba jalatti fakkasame malee, gatiiwwan y gatiiwwan sirrii bakka hin bu`ani. Osoo dhibbayyaa filte, gatiiwwan y akka akaakuu ida`amati madaalamu.
Title is: Akaakuu Taattoo Sarara